Ny orinasa Shinoa Marine thermique workjacket Factory - Marine thermal workjacket Manufacturers and Suppliers - Zhenhua Electrical
Ny tombony amin'ny vokatra
Ivontoerana fikarohana siantifika
Toe-jomoka tsy mety levona
Lifejacket Light And Lifebuoy fahazavana
Fiainana an-dranomasina mpamonjy voina
Ravinkazo tsy mety ritra
Home > Products > Toe-jomoka tsy mety levona > Marary fiarovana ny tontolo iainana
Marary fiarovana ny tontolo iainana
Ny milina mpiasan'ny fahasalamana ara-pototra Ny singa lehibe indrindra amin'ity fehintsoratra ity dia maivana, malefaka, be dia be, mamaha tanteraka ny fahatsapana fitafiana
Ny singa lehibe indrindra amin'ity fehintsoratra ity dia ny hazavana, malefaka, goavam-be, mamaha tanteraka ny fahatsapana fitafiana, mampihetsi-po ny asa, miarahaba ireo namana hiantso mba hiresaka
Miara-miasa amin'ny fiainana an-dranomandry, marika antsoina hoe marenina marenina (mampiasa fitaovana manokana hamonjena aina, mafana, rivotra, afo, fampitandremana ary asa hafa.)
Herinandro: Mihantona 90 kg ny lanjany, tsy misy famerenana rehefa 10 minitra.
Ny hafanana dia tsara, ary ny fitaovana be dia be dia be dia be rivotra sy mafana, mety tsara ho an'ny rivotra avo sy mangatsiaka be eny an-dranomasina.
Mora ny mitafy, tsy misy fiantraikany amin'ny asa, loko tsara tarehy, mamiratra, miloko miboridana ary maneso amin'ny soroka.
Ny fampidirana entana dia toy izao manaraka izao:
Loko afovoany: Ny lobolobo velona dia mavomavo amin'ny loko ary mora hita.
Ny endriky ny endriky ny: style long sleeve, specifications of sale hot
Fitaovana malefaka: fitaovana malefaka eo akaikin'ny valanaretina, ny tendany ary ny foza ambany. Ny lamba sy ny lamba fanatanjahan-tena dia viscose, ny teknolojia arahin'ny PU dia manify, ary ny Teflon dia ny rano sy ny ranon-tsakay. Vokatry ny lamba tsy miloko (nylon oxford) ny fivalanana anatiny sy ivelany, ny lamba dia malefaka sy mangatsiaka, tsy dia marefo loatra ny tavy, ny fiainan'ny serivisy dia mihoatra ny in-telo avo lenta toy ny lamba tsotra, tsy misy rano, UV, mafana, mandinika ny alina.
Mitafy: Azo atao tsara ao anatin'ny 20 taona ny akanjo lava. Rehefa vita ny rano velona, ​​dia tena tsara ny miorim-paka ao amin'ny fitaovana mitsingevana, mety tsara ny fomba fitadiavana, ary tsy hisy ny fihenan-kery, ny ketrona ary ny fiantraikany amin'ny vokatra.
Tanjaka ara-material: Fiatoana mahery vaikaâ ‰ ¥784N, lambam-barotra: tsy latsaky ny 106 latitude sy ligne ligne per 100mm, teteza-teteza:â ‰ ¥882N, tanjaka mitam-basy: masom-basyâ ‰ ¥19.6N.
Ny vokatra manontolo sy ny fitaovana rehetra dia nosedrain'ny "Supervision, Fitsaboana ary Fitsapana" an'ny Marine Product Quality, ary mifanaraka amin'ny fepetra nasionaly. Ny fanaraha-maso ny vokatra ankapobeny dia ahitana: ny fehezan-koditra, ny fikorontanan'ny tosi-drà, ny fitsapana ny fitsapana, ny fitsapana haingana sy ambany ambany, ny fahaverezan'ny fihenan-tsofina, ny fitsapana matanjaka, sns., Ary misy ihany koa ireo fitsapana izay manohitra ny fandrobana, ny solika, ny asidra ary ny alika, dia mahafeno fepetra.
Ny votoatin'ny fampiharana: Ny fiarovan-tratra dia miaro ny fiarovana ny sambo fiaramanidina an-dranomasina, ny ady amin'ny tondra-drano ary ny famonjena, ny sambo, ny fizahan-tany rano, ny indostrian'ny orinasa sy ny orinasa mpitrandraka harena an-kibon'ny tany. Izy io no ankapobeny indrindra ho an'ny mpiasa amin'ny ririnina amin'ny ririnina.
Hot Tags: Miaramila tandindonin-tsoavaly, China, manerantany, mozika, ao amin'ny tahiry, Customized, ambany vidiny, mividy fihenam-bidy, Mponina, vidin-tsolika, mora, avo lenta, orinasa, Made in China, vidin'ny
Miasa ho an'ny sambo mpanjono ny Lifejacket
Fitaovam-piadiana ho an'ny fiainana an-jambany
Fiainana tsy mety levona
Automatique ontable safidy
Fanamafisana ny fiarovana ny otrikaretina
Address: No.111 yingang rd., Xizhou, xiangshan, faritanin'i zhejiang, china